Badweyntimes.com » Musharaxiin madaxweyne iyo xildhibaanada oo caawa aan kala jiifaneyn & ololaha doorashada oo sii xoogeystayBadweyntimes.com
Musharaxiin madaxweyne iyo xildhibaanada oo caawa aan kala jiifaneyn & ololaha doorashada oo sii xoogeystay
Iyadoo saacado kooban ay naga xigaan xiliga ay bilaabaneyso doorashada madaxweynaha oo beri ku beegan ayaa musharaxiinta ku tartamaya xilkaas waxay caawa wadaan ololahoodii ugu dambeeyey.
Kulamo adag ayaa waxay ka socdaan qaar ka mid ah hotelada iyo xarumaha ay ku sugan yihiin xildhibaanada baarlamanka, kuwaasoo ay ku lug leeyihiin musharaxiinta qaar, waxaana socda cod kala iibsi iyo gorgartan jilbaha la isu aastay oo caawa oo dhan aan loo kala kaceynin.
Musharaxiinta qaar ayaa sii labo jibaaray ololahooda doorasho ka dib markii ay indhaha ka qaadeen musharaxa Xasan Shiikh oo galabta dhoolatuskii ugu weynaa ka dhigay Muqdisho kaasoo kulan qaddo ahaa la qaatay xildhibaano labo boqol gaaraya oo taageero u muujiyey.
Wararkii ugu dambeeyey caawa ee ololaha doorashada ayaa sheegaya in musharaxiinta kala ah C/qaadir Cosoble iyo Caddow Cali Gees ay isbaheysi siyaasadeed la sameysteen musharaxa Xasan Shiikh ka dib wada hadalo kala gooni ah oo dhexmaray muddo baddana laga soo shaqeynayey.
Caddow Cali Gees oo ah ganacsade ay jufo hoosaad ka soo wada jeedaan Xasan Shiikh ayaa mudooyinkan waxaa ka dhexeysay labada nin xurguf hoose, balse wadahadalo dheer ka dib waxaa lagu guuleystay caawa iney isku soo dhowaadaan.
Sidoo kale musharaxa C/qaadir Cosoble oo isna ah ganacsade lacag badan heysta ayaa wadahadalo weli socda kula jira musharaxa Xasan Shiikh, waxaana warar ku dhow dhow ay sheegayaan in inta badan lagu heshiiyey.
Xasan Shiikh ayaa labada nin u sameeyey balan-qaadyo kala duwan oo la xiriira xilal iyo arrimo lagu xoojinayo ganacsigooda, waxaana taas bedelkeed laga rabaa iney ka tanaasulaan tartanka, xoojiyaana ololaha Xasan Shiikh ku doonayo inuu mar kale xilka madaxweynaha qabto afarta sano ee soo socota.
Dhinaca kale, musharaxa Shiikh Shariif ayaa isna caawa kulan albaabada loo laabay la qaaatay musharaxa Cumar C/rashiid, weli faahfaahin badan lagama helin waxyaabaha ay ka wada hadleen iyo haddii ay heshiis cusub gaareen.
Musharaxiinta waaweyn iyo xildhibaanada baarlamanka ayaa waxaa caawa u taalla dhafar siyaasadeed oo jiif la’aan ah, waxayna ku jiraan kulamo socon doona illaa gelinka dambe ee caawa.
Musharaxiinta qaar ayaa caawa furay boorsooyinkooda, iyagoo xildhibaanada taageersan u qeybinaya lacagihii codadka looga iibsaday, halka xildhibaano kale subixii xiliga doorashada ka hor loo balan-qaaday in la siin doono lacagaha loo balan-qaaday.
Musharaaxiinta Boorsooyinkooda furay caawa ayaa waxaa ka mid ah Farmaajo, Cumar C/rashiid, Saciid Deni iyo Xasan Shiikh Maxamuud.
Jawiga guud ee magaalada Muqdisho ayaa caawa ka bedelan sidii hore, waxaana ka sokow wadooyinka xiran iyo dhaqdhaqaaqa la xadiday ay dadweynuhu hadal hayaan doorashada beri dhici doonta, iyagoo saadaal kala duwan iyo falan-qeyn ka bixinaya musharaxa doorashadan ku soo bixi doona.
Doorashadan madaxweyne oo ah tii ugu adkeyd, uguna xiisaha iyo xamaasada badneyd ee soo martay Somalia ayaa waxaa indhaha ku haya Soomaalida ku dhaqan gudaha iyo dibeda oo eegaya xildhibaanada baarlamanka ee metelaya halka ay codkooda dhigaan.
Daawo:MD Xasan oo caawa baahiyay muqaal shacabka kula hadlaayo hadii oo doorashada kusoo laaban waayo
Daawo:Qaabka doorashada saake udhaceyso iyo gudoomiyaha doorashada soo saaray digniino cusub